ac gear motor iibinta, 3 wejiga ac gear motor, ac motor
ac gear motor, 3 wejiga ac ac matoor ee qiimaha iibka
Nooca matoorrada qalabka AC
Gawaarida 'AC gear' oo wata koontarool xawaare, 3 wejiga ac gear motor, ac right xag gear gear, motor gear with brake, AC gear motor low rpm, matoorrada AC Gear Parallel Shaft, Inverter Duty AC Gear matoorrada, 110V Geared motor, ac gear motor 6 rpm, ac gear motor 100 rpm, ac gear motor 60 rpm, AC gear motor 30rpm, Custom AC Gear Motors iwm.
Waa maxay matoorka AC?
Qalabka korontada ku shaqeeya ee 'AC gear motor' waa matoor ku xiran gearbox ama dariiqa gudbinta si looga dhigo torques gebi ahaanba ku lifaaqan waajibaadka joogtada ah, codsiyada ujeedada guud. . Mashiinnada qalabka korontada ku shaqeeya ee loo yaqaan 'AC gear matoorrada' waxaa loo qaabeyn karaa inay xamuulaan noocyo kala duwan oo xawli ah oo ku socda xawaare caddaalad ah oo iswaafaqsan taas oo ah Codsiyada u baahan heerar sare ee miisaanka wax soo saarka. Waxaa jira laba nooc oo matoorrada marsho ee AC ah oo saddex waji iyo hal waji ah. Seddex waji ayaa loogu talagalay warshado badan oo isticmaalaya kan kalena waxaa loogu talagalay codsi guri inta badan.
Sidee loo Doortaa Gawaarida AC?
Laga soo bilaabo spped, waxaad kala dooran kartaa AC gear motor rpm low, AC gear motor 12rpm, ama AC gear motor 30rpm iwm. Marka laga bilaabo habka codsiga, waxaad ka heli kartaa mootada gawaarida leh bareeg, aaladda gawaarida gawaarida leh xakamaynta xawaaraha ama Inverter Duty AC Gearmotor . Laga soo bilaabo nooca qalabka, waxaa ku yaal helmal, gooryaan, bevel iwm Haddii goobtaadu aad u yar tahay oo aan la isticmaali karin matoorrada maareynta 'AC gear', ka dib raadi Compact AC Geared Motor kaas oo xitaa la qaabeyn karo.
Adeeg noocee ah ayay Sogears bixin kartaa?
Sogears waa soosaar koronto xirfadle ah oo ka timid Shiinaha iyo kooxdeena injineernimada waxaa loogu talagalay in badan oo AC GEAR MOTOR & GEAR HEAD ah macaamiil badan oo ajnabi ah. oo leh farsamooyinkeena horusocodka ah Matooradeena korantada ku shaqeeya ee AC waxay gaarayaan culeysyo gaaraya 820,000 lb-iyo xawaaraha xawaaraha ilaa 13,540: 1 oo buuxiya inta badan dalabaadka warshadaha. Tan ugu muhiimsani waa in aysan ahayn oo keliya tayo weyn, laakiin ay ka hooseyso qiimaha mootada marsho AC.
Buug-gacmeedkayada guud ee 'PDF Catalog' ee loogu talagalay AC Gear Motors
Qalabka gawaarida AC ee iibinta Shiinaha
Sawirrada gawaarida AC
Kusoo dhawow nala soo xiriir si aad u ogaato qiimahayaga qalabka AC.
ac gear motor leh xawaare xakameyn
La xiriir qiimaha matoorka AC
AC gear motor 30 rpm
3 wajiga ac gear motor
Maxaa loo Doortaa Sogears?
Waxaan nahay soo saare xirfad-yaqaanno caan ah oo ku shaqeeya matoorrada qalabka AC oo waxaan bixinnaa dhammaan noocyada matoorrada gear-ka ee loogu talagalay codsiyada kala duwan ee warshadaha oo leh muuqaal tayo sare leh.
Eeg matoorrada korantadayada
Iibinta warshaddeena korantada korantada leh oo tayo wanaagsan leh, 10 hp ama 15 HP motor tusaale ahaan.
Eeg Wareegayaga 3 ac gear gear
Codsiga ac matoorkiisa iyo codsiyadiisa, mooto gacmeed leh fariin
AC gear motor 60 rpm, AC gear motor low rpm, Baadhitaanno laxiriira xawaaraha dheereeya
Qiimaha matoorka AC
Helical Gearbox Gudaha | F taxane isbarbar dhigaya xawaaraha gawaarida gawaarida halista ah
Yantai, Shandong, Shiinaha